Isku-darka Beagle Lab: 15 Xaqiiqo oo aan ka jecelnahay Beagador-ka dhalaalaya - Taranka
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay bahalka quruxda badan, ama Labrador qurux badan , laakiin maxaa dhacaya haddii aad isku dhejiso? Waa maxay sababta Isku-dhafka Beagle Lab dabcan.
Noocan quruxda badan ee isweydaarsiga ayaa markii ugu horreysay soo galay dunida eyga illaa 30 sano ka hor, waxaana tan iyo xilligaas ka soo baxayay faan yar.
Laakiin waa maxay eeygan? Maxaa jira oo laga ogaanayaa iyaga?
Waa kuwan 15 waa inay ogaadaan xaqiiqooyinka ku saabsan dhalashada Beagador taas oo kaa dhigi doonta inaad jacayl la gasho iyaga!
1. Isku darka sheybaarka Beagle wuxuu leeyahay shan magac oo la aqoonsan yahay
2. Waalidiintooda Oo Lagu Kala Qiimeeyay # 1 Iyo # 6 Kuwa Ugu Caansan
3. Isku darka sheybaarka Beagle waa mid naxariis leh
4. Waxay Leeyihiin Calool Labrador
5. Isku-darka Labbarka 'Beagle Lab' wuxuu leeyahay Feejignaan aad u Gaaban
6. Afar naadi oo kala geddisan ayaa aqoonsaday Beagador-ka
7. Qiimaha Isku-darka Labbelka Beagle $ 600 USD
8. Cimriga Isku-darka Labeetiga Beagle wuxuu u dhexeeyaa 10 illaa 12 Sano
9. Waxay Sameeyaan Ilaalin Fiican
10. Asalkoodu Lama yaqaan
11. Beagador waxay noqon kartaa shukulaato, jaalle ama madow (iyo 22 midab oo kale)
12. Waxay jimicsi sameeyaan ku dhawaad ​​60 daqiiqo maalin kasta!
13. Waalidiintoodu Waxay Dib Ugu Laabteen Qarnigii 19aad
14. Labada waalidba waa isjecelyihiin oo Eey naxariis badan
15. Isku darka sheybaarka beagle waa eey weyn oo qoys
Tani waa eeygii ugu horreeyay adduunka ee lagu yaqaan wadar ahaan shan magac oo kala duwan!
Isku-dhafka Beagle Lab
Isku darka 'Beagle Labrador', oo sidoo kale loo yaqaan dhammaan magacyadaas oo dhan, waa naqshadeeye iskutallaab inta udhaxeysa Beagle iyo Labrador.
Nooc caan ah oo ka soo jeeda laba waalid oo caan ah, Beagle iyo Labrador ayaa ah kuwa 6aad iyo 1aad eeyaha ugu caansan America siday u kala horreeyaan .
Labada noocba waxaa lagu yaqaanaa nooca iyo dabeecada ciyaarta, waana kuwo caqli badan.
Sidaa awgeed, inta badan Beagadors waa eeyo jecel oo xiiso leh, kuwaas oo ah saaxiibo naxariis leh.
Isku darka sheybaarka 'Beagle Lab' waa kuwo qalbi qalbi ah, eeyo jecel, kuwaas oo sameeya xayawaan guriyeed wanaagsan.
Aad ayey u samir badan yihiin waxayna u dulqaadan karaan qadar cadaalad ah oo ciyaarta ka hor inta aysan si qurux badan ugu fariisan qol kale.
Markay ciyaartu tahay mid baashaal iyo madadaalo leh, eeyahaani way ku faraxsan yihiin inay ciyaaraan, badiyaa kama lumiyaan xiisaha saacado ( gaar ahaan haddii ciyaartaasi la soo qaado )!
Labada Beagle iyo Labrador labaduba waxay muujin karaan dabeecad burburin ah marka aan la siinin jimicsi ku filan sidaas darteedna tani waa wax lagu xusuusto Beagle Lab Mix
60 daqiiqo oo firfircoon ayaa looga baahan yahay maalin kasta isku dhafkan, oo lagu daray madadaalo iyo ciyaaro.
Waxa kale oo jira suurtogalnimada Beagador inay ku kobciso walaaca kala-tagga. Haddii aadan celin karin cibaadada eygaaga, waxaa laga yaabaa inay fikrad fiican tahay inaad tixgeliso ey kale.
Marka la soo koobo, ma jiraan wax Beagador ah oo aan jeclayn inay cunaan!
Eeyahaani waxay u egyihiin inay waalidkood ku hayaan 'Caloosha Labrador' iyo Beagles oo naaneysta kalgacalka leh ee 'Chow Hound', natiijadaasna waxaa lagu yaqaan inay cunaan wax kasta oo muuqda.
Markaad quudineyso isku-darka shaybaarka Beagle, waa in la qaadaa tallaabooyin lagu hubinayo inaysan cunin wax aad u badan, si dhakhso leh.
Eydan firfircoon waxay u baahan yihiin qiyaastii saddex koob oo kibble ah maalin kasta, laakiin tan waa in loo kala qaybiyaa laba cunto oo yaryar oo ah 1½ koob. Si dhakhso leh wax u cunida waxay sababi kartaa caloosha caloosha , xaalad halis ah oo dilaa ah oo ku badan Labradors.
Labada Gorgor iyo Labradorba way u nugul yihiin horumarinta arrimaha ilkaha .
Quudinta shaybaarkaaga Beagle Isku dar cunno tayo sare leh oo qallalan ayaa ah tan ugu fiican ee lagu helo eey faraxsan oo caafimaad qaba.
Haddii eeygaagu uu ku jiro guri ay carruur leeyihiin, waxaa hubaal ah inay rabaan inay quudiyaan daaweynno badan. Isku day inaad iyaga siiso si ay u quudiyaan cunno fudud oo caafimaad leh sida miraha eyda oo badbaado leh ama veggie!
Isku-darka Beagle x Lab waa mid aad u fudud tababarka. Thanks to 'Labrador caloosha' , iyagu waa kuwo aad u janjeedha cuntada oo sifiican ula shaqeeya xoojinta.
Adeegsiga dhag-gujiyaha ayaa ah hab wanaagsan oo lagu xoojiyo dhaqanka.
Tan markii la dhaho, waxay leeyihiin feejignaan aad u gaaban waxayna u muuqdaan inay si fudud ku mashquulinayaan, gaar ahaan haddii ay qabtaan jeedal ah wax uraya caraf udgoon ama bisadda deriska!
Ka dhigida fadhiyada tababarka gaaban iyo barta waxay kaa caawin doontaa inaad ilaaliso dareenka eeygaaga.
Sixitaanka jireed ama ciqaab marna fikrad fiican kuma lahan Isku-darka Lab ee Beagle.
Diintooda heerka sare ah macnaheedu waa tababarka xoojinta togan wuxuu xoojinayaa xiriirka ka dhexeeya idinka, halka ciqaabkuna uu daciifin doono.
Maaddaama noocani yahay mid isu-eg, haddii kale loo yaqaan eey naqshadeeye , Iyaga ma aqoonsana Naadiga Xayawaanka Mareykanka.
Iyadoo ay taasi jirto, iyaga Beagle Lab Mix waxaa aqoonsan naadiyo kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin:
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka (ACHC)
Diiwaanka Eyga ee Mareykanka (DRA)
Diiwaangelinta Taranka Nakhshadeeye (DBR)
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Naqdiga (DDKC)
Waqtigaan la joogo, ma jiro naadi la aasaasay oo si gaar ah loogu yaqaan 'Beagle Lab Mix'. Sidoo kale ma jiro shabakad samatabbixin gaar ah oo la aasaasay.
Xitaa iyadoon la helin shabakadooda badbaadinta, weli waxaa suuragal ah in la badbaadiyo Beagador sida ay mararka qaarkood noqon karaan laga helay hoyga badbaadinta .
Eeyahaani waa kuwo dhif ah , oo aan lahayn shabakad soosaarayaal, ama naadi ay ku diiwaangeliyaan iyaga, helitaankooduna waxay noqon kartaa caqabad!
In kasta oo ay yaryihiin, eeyaha yaryar waxay u muuqdaan kuwo si jaban u qiimeeya, oo badanaa ku kaca inta udhaxeysa $ 300 iyo $ 600 USD.
Markaad haysato eeygaaga, waa inay ku koraan qiyaas ahaan heerka soo socda:
Miisaanka (lb) Dhererka (inji) Miisaanka (lb) Dhererka (inji)
6 Bilood 25 shan iyo toban labaatan 14
12 Bilood 40 18 35 16
18 Bilood konton labaatan Afar. Shan 19
Waa muhiim in la xasuusto in nooc kasta oo iskutallaabtu ka duwan tahay oo markaa noqoshada dhawr rodol ama inji waa isku celceliska dhinacna sabab uma aha walaac.
Waxaa jira fikrad khaldan oo caadi ah in dhammaan noocyada isweydaarsigu ay yihiin eeyo aad u caafimaad qaba .
In kasta oo inta badan Beagadors ay ku noolaan doonaan nolol dheer iyo caafimaad (qaar ilaa 12 sano jir ah), waxaa jira arrimo caafimaad oo yar oo milkiileyaasha suurtagalka ah ay tahay inay ka fekeraan.
Mid ka mid ah arrimaha ugu waa weyn ee Beagador wajahaya waa Gastric Torsion, ama Bloat. Tani waa xaalad laga hortagi karo, milkiileyaasha suurtagalka ahna waa inay isticmaalaan 'tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah' ah oo u qaybi cunnada eydooda qaybo yaryar.
Cudurka 'Intervertebral Disc Disease' sidoo kale waa mid caan ah, tani waa xaalad ay barkimooyinka u dhexeeya laf-dhabarta ay bilaabaan inay xumaadaan, taasoo u horseedaysa inay waayaan awooddooda naxdin-darrada.
Sida noocyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweynba, sinta iyo xusulka dysplasia sidoo kale waa arrimo suuragal ah. Xaaladdan oo kale, sinta ama suxulka laabatooyinku waxay u koraan si khaldan, sababo la xiriira dhaawac ama hidde. Sinta iyo xusulka dysplasia ma ahan mid laga hortagi karo.
Waxa kale oo jirta suurtagal yar oo ah inuu Labrador x Beagle horumariyo:
Ciladaha Indhaha: Indha-beel ama Indho-indheyn Horusocod ah
Cilladaha Wadnaha ee Dhalashada
Eeyadan waxaa lagu yaqaan inay cod dheer yihiin markay dareemayaan ama cabsi dareemayaan, taasna waxay keentay inay ilaaliyaal fiican yihiin.
Sidoo kale way ciyi karaan markay caajisaan, markaa ku mashquulintoodu waa waajib.
Maaddaama isku-darka sheybaarka 'Beagle Lab' uu yahay canaan cusub oo isku dhafan, wax aad u yar ayaa laga ogyahay taariikhdooda.
Waxay u badan tahay, inay soo jireen 1990-kii iyadoo u janjeerta taranka naqshadaha xulashada oo bilaabmaya.
Waa la rumeysan yahay waxay ka soo bilaabeen Ameerika , laakiin tani sidoo kale lama hubo.
Maaddaama Beagle Lab Mix uu yahay iskutallaab, waa wax aad u adag in la sii saadaaliyo muuqaalkooda (tani sidoo kale waa mid ka mid ah sababaha ay u aqoonsan la’yihiin naadiyada xero kasta).
Waxay culeys ka qaadi karaan meel kasta oo u dhexeysa 20 illaa 70 lb waxayna istaagaan inta u dhexeysa 13 iyo 24 inji.
Xaaladaha badankood eeyahaani waxay ku dhammaadaan wejiga iyo dhegaha Gorgorka, iyo jaakadda iyo midabaynta Labrador. Koodhku badanaa biyaha uma adkaysto.
Halka Labrador uu leeyahay kaliya seddex midab oo isku dhafan (shukulaato, jaalle iyo madow ),, waxaa jira 25 isku dhafan oo midab macquul ah oo ah Beagle!
Sidaas awgeed, waxaa jira waxyaabo badan oo qurux badan oo isku dhafan oo suurtagal ah waxaa laga yaabaa inaad ku aragto Beagador.
Celcelis ahaan, eeyahaani waxay u muuqdaan inay fariistaan ​​meel u dhexeysa Beagle-firfircoon iyo Labrador caajis ah markay tahay shuruudaha jimicsiga.
Beagador waxay u baahan tahay qiyaastii 60 daqiiqo oo jimicsi ah maalin kasta.
In kasta oo haysashada deyr si loogu oggolaado inuu is-jimicsado ayaa faa'iido leh, tani bedel uma ahan socod wanaagsan oo duug ah oo loogu talagalay Beagle Lab Mix-kaaga.
Iskuday inaad qaadatid socodkaaga shaybaarka 'Beagle Lab Mix', ama xitaa dabaasha!
Sida waalidkood ee Beagle, laguma talin inay eeygan ka baxaan sunta rasaasta maxaa yeelay haddii ay uriyaan lagama yaabo inay u soo noqdaan.
Xitaa way ku raaxeysan karaan frisbee, oo ku celcelin iyo anshax xitaa waxay ka dhigi karaan horyaallo firfircoonaan hiwaayadeed.
Labrador waxaa markii ugu horeysay lagu arkay jasiiradda Newfoundland, Canada 1800-yadii.
Eeyadan ayaa kalluumeysatada maxalliga ah u adeegsan jireen inay ku jiidaan shabagyadooda, ama ugaarsadayaasha si ay u soo doontaan ugaarsiga ay toogteen, sida shimbiraha ama bakaylaha.
Waxaa loo yaqaanay inay yihiin asxaab daacad ah oo inta badan aan cabsi ka qabin raacdadooda bartilmaameedka ay damacsanaayeen. Naadiga Kennelka Mareykanka ayaa markii ugu horreysay la aqoonsaday Labrador retriever sanadkii 1917 .
Eeyaha nooca hore ee loo yaqaan 'Beagle' ayaa loo maleynayaa in loo arki doono sidii xilligii Roomaanka.
'Beagle' waxaa badanaa loo isticmaalay in lagu sharaxo wax kasta huun yar caraf , illaa 1830-meeyadii markii isbeddelka Beagle-ka casriga ahi bilaabmay.
Beagle-ka casriga ah ayaa la soo saaray bakaylaha ugaarsiga iyo hares.
Sanadkii 1890-kii, ayaa la soosaaray jaangooyooyinka noocaas ah waxaana lagu daray AKC-dii 1885-kii.
In kasta oo aysan suurtagal ahayn in la saadaaliyo dabeecadda Beagle Lab Mixd haddana way fududahay in wax lagaaga sheego waalidkood.
Gorgorku waa lagu yaqaan baashaal jecel oo naxariis leh . Jacaylka noqoshada dhinaca qoyskooda oo ay ugu faraxsan yihiin sankooda dhulka, waxay ku dhex lugeynayaan kaynta iyaga oo wata boggooda ugu fiican.
Waa la yaqaan inuu noqdo mid dhaban iyo xumaan badan haddii mulkiilahooda loo arko inuu daciif yahay, marka joogtayntu waa fure!
Intaas ka sokow, Beagles waxaa lagu yaqaan inay horumariyaan dareen kaftan ah iyo xitaa inay khiyaanooyin ku ciyaaraan milkiilayaashooda!
Noocani wuxuu u eg yahay mid cod badan. Beagles ayaan ka laba labayn doonin inay kula socodsiiso sida ay dareemayaan! Gorgorku wuxuu leeyahay saddex cod oo kala duwan. Waxay leeyihiin jilif caadi ah oo qaylinaya, iyo ka dibna Beagle-kii caadiga ahaa “baay” .
Labradors waxaa lagu yaqaan inay yihiin saaxiibbo kalgacal iyo naxariis leh. Sida Baagagga oo kale, waxay jecel yihiin inay garab istaagaan milkiilahooda, waxayna ku jiraan kuwa ugu farxadda badan markay ka farxiyaan milkiilayaashooda.
Noocani badanaa waa sida eey dabeecad wanaagsan, oo badanaa la xusho gargaar ahaan ama ey daaweyn ahaan ah .
Way fududahay inay socdaan waxayna sameeyaan eeyo aad u fiican milkiilayaasha markii ugu horreysay. Waxay layaab ku yihiin carruurta da 'kasta leh waxayna sameeyaan eeyo rey wanaagsan.
Eeyadan waxay leeyihiin xamaasad dabiici ah oo nolosha ah, wax walbana waa u quud-dareyn Labrador Retriever.
Beagador waa udub dhexaad ku habboon kuwa jecel Beagle laakiin aan la socon karin shuruudaha jimicsiga.
Haddii kale, Beagle Lab Mix waa ciyaar fiican oo loogu talagalay kuwa jecel Labrador waxoogaa firfircoon oo firfircoon.
Isku darka shaybaarka 'Beagle Lab' waa ciyaar u fiican qof kasta oo raadinaya eey firfircoon oo reer ah oo jecel inuu socdo sida ay u jecel yihiin inay seexdaan!
Isku-darka 'Beagle Lab Mix' waa eey jecel, ciyaar iyo dabeecad xumo leh.
Waxay jecel yihiin inay garab istaagaan milkiilahooda, ha ahaato mid socod ku baxa ama ku qaboojiya guriga sariirta. Runtii waxay u heellan yihiin milkiilayaashooda, midkood, laba ama dhammaan qoysaskooda.
Cibaadadan waa in la soo celiyaa si kastaba ha noqotee, kuma fiicna caajiska, mana ka baqayaan inay kula soo socodsiiyaan markay faraxsan yihiin!
Haddii aad raadineyso socodka, socodka, orodka ama saaxiibka dabaasha, kani waa eey kugu habboon adiga.
Maxaad u maleyneysaa dhalashada iyo dhalashada Beagador? Noogu reeb fikirkaaga fikirkaan ku saabsan faallooyinka hoose.
Midabada Pomeranian: Liistada Oo Dhammeystiran Dhammaan 13 Midabada Midab ee La Aqoonsan Yahay
farqiga u dhexeeya labrador iyo dahab
waa maxay pitbull jeebka
husky mix oo leh eeyaha dahabiga ah ee soo celiya
sanka cas ee maraykanka godad bull terriers